Kudzidzisa mabhuku nhasi. Kubvunzana nemudzidzisi. | Zvazvino Zvinyorwa
Kudzidzisa Zvinyorwa Nhasi. Kubvunzana nemudzidzisi.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Mabhuku
Nhasi ndinotaura na Victor Irun, purofesa mune imwe nzvimbo iri pakati pe Madrid, kwaanodzidzisa vadzidzi veESO neBaccalaureate nezve kudzidzisa mabhuku nhasi. With anopfuura makore makumi maviri emakore ane ruzivo kudzidzisa mabhuku, ndinoda ndinokutendai nenguva wakazvipira kupindura iyi mibvunzo. Ndinokutendaiwo kutaura chokwadi uye kuda (izvo zvandinoziva ruoko rwekutanga) waanotaura naye nezve zvinyorwa uye inotsanangura iyo kudzidzisa panorama kazhinji uye nyaya iyi kunyanya.
1.1 Zvinyorwa mudzidzisi nekudana?
1.2 Ndeupi mutsauko wawakaona mukudzidzisa kwemabhuku mumakore ako eruzivo?
1.3 Ndezvipi izvo vadzidzi vako vanofarira zvakanyanya uye zvishoma? Uye chii chaunofarira zvakanyanya uye zvishoma kuti uzvidzidzise iwe pachako?
1.4 Chii chaungade kuti ugone kuvandudza kana chii chauri kurasikirwa mukudzidzisa mabhuku? Zvirongwa zvekudzidza, maitiro, kufarira?
1.5 Nderipi bhuku rekutanga kana munyori akakurova uye nei?
1.6 Ndiani munyori wako waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
1.7 Ndeupi munhu mubhuku iwe waungadai uchida kusangana naye?
1.8 Mhando dzako dzaunofarira?
1.9 Chii chauri kuverenga izvozvi?
1.10 Uye pakupedzisira, chii chaunowana chinogutsa kwazvo nezvekudzidzisa mabhuku?
Zvinyorwa mudzidzisi nekudana?
Nekudaidzira ... Zvinoita kunge mutauro wechitendero kwandiri. Zvaitaridzika kwandiri, zvakapusa, a inogona kunaka kutengeserana - saka, kwete izvozvi- izvo zvakashandurwa kune zviroto zvangu.
Ndeupi mutsauko wawakaona mukudzidzisa kwemabhuku mumakore ako eruzivo?
Zvinyorwa zvave zviripo pakona -zvakawandisa maererano nemutauro (syntax, kunyanya mune mamwe madhipatimendi) se, pamusoro pezvose, muzvirongwa zvekudzidza izvo zvave kubvisa mutoro wekudzidzisa weHumanities mune zvese. Iyo neoliberal, nhema, inoparadzanisa kubata: yakawanda yeChirungu, matekinoroji ... Kufunga kushoma.
Ndezvipi izvo vadzidzi vako vanofarira zvakanyanya uye zvishoma? Uye chii chaunofarira zvakanyanya uye zvishoma kuti uzvidzidzise iwe pachako?
Kune vadzidzi, zvinoenderana. Asi nguva dzese Ini ndinowana zvishoma avo vanofarira nhoroondo yezvinyorwa. (Dzimwe nguva vatinoshanda navo vanoitsanangura zvinouraya, vasina shungu, rudo ...). Ini ndinonyanya kufarira zvinyorwa zvemazuva ano, asi ini ndinoda dzimwe nguva.
Chii chaungade kuti ugone kuvandudza kana chii chauri kurasikirwa mukudzidzisa mabhuku? Zvirongwa zvekudzidza, maitiro, kufarira?
Zvese. Asi pamusoro pezvose izvozvokuti zvirongwa zvekudzidza zvaive nehukama hwevanhu izvo izvozvi havana. Iyo nzanga yaive isina kukwikwidzana, kuwanda ... Tiri vana vasina hunhu.
Nderipi bhuku rekutanga kana munyori akakurova uye nei?
Bhuku rangu rekutanga rakakura ndi chinyorwa chakafupiswa chaDon Quixote nemaprinta naDoré. Asi ndakaverenga "mabhuku nevakoma vangu vakuru." Kubva Emile Zola kuenda kuGaldós, La Burrita Kwete, naJosé María Sánchez-Silva kana Sven Hassel.
Handina "vanyori vandinoda," uye ndinofunga paunowedzera kuverenga, ndipo paunotizve mubvunzo uyu. Vanyori: vazhinji, ye27, Cernuda, Lorca ... Asati: Machado, Max aub. Zvakawanda, zvakawanda ... Hazvigoneke kutaura izvi kana izvo.
Ndeupi munhu mubhuku iwe waungadai uchida kusangana naye?
Ndingadai ndakada kusangana NazarinneGaldós, semuenzaniso.
Gender: zvose. Ndakaverenga nhetembo, enganonyorwa ... Kunyangwe kushoma yemitambo, asi ndinoenda kuti ndione zvakanyanya.
Chii chauri kuverenga izvozvi?
Ndiri kuverenga Chiedza chehudiki, neGerman, Ralf Rothmann -novel- uye yechinyakare yeiyo XX: Zero uye kusaguma, rakanyorwa naArthur Koestler. Uye zvimwezve.
Uye pakupedzisira, chii chaunowana chinogutsa kwazvo nezvekudzidzisa mabhuku?
Chiri kundigutsa zvakanyanya nezvekudzidzisa mabhuku ndeichi mazuva evadzidzi vangu andirega ndichizviita, mazuva mashoma avanopindaIvo havasi kudzidza Chirungu kana biology, apo ivo vanongo deredza mwero wavo weruzha nehasha (kuzviisa naFaulkner).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kudzidzisa Zvinyorwa Nhasi. Kubvunzana nemudzidzisi.
Nyaya dzehama dzeGrimm. Wilhelm Grimm Anniversary
"Akazvarwa mhute ini: Humambo hwekupedzisira". Nzira yakanaka yekutanga naBrandon Sanderson.